PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - Usezakhele igama owebhizinisi lokungcwaba
Usezakhele igama owebhizinisi lokungcwaba
Isevule amagatsha phesheya kwezilwandle
Ilanga - 2018-02-15 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
AKUKHOLAKALI ukuthi ibhizinisi lakhe kalikahlanganisi naneminyaka eli-10 likhona njengoba selenza inzuzo elinganiselwa ku-R150 million ngonyka, kanti impumelelo engaka uthi kayenziwa wukuqonda noma wukuhlakanipha kwakhe kepha wukubeka uNkulunkulu phambili kunanoma yini ayenzayo nokuqinisekisa ukuthi uqasha abantu abawaziyo umsebenzi.
UNkz Nomfundo Mcoyi kakukholakali ukuthi uqale ibhizinisi lokungcwaba engazi lutho ngalo njengoba ethi eminyakeni eyisi-8 eyedlule, ngesikhathi ethola ucingo oluthi sekukhona oshonile okumele bamgcwabe, uvele waphambana ikhanda, wangazi nokuthi kumele aqale ngaphi.
UNkz Mcoyi ungumnikazi wenkampani ehlonishwayo emkhakheni wabagcwabi, esabalele iNingizimu Afrika yonkana, yaze yaphumela nangaphandle kwaleli njengoba esengenise naphesheya kwezilwandle.
Uyisikhulu esiphezulu nomsunguli we-Icebolethu Group, ngaphansi kwayo okunezinkampani i-Icebolethu Funerals, i-Icebolethu Caterers, i-Ikhayelihle Tombstones, i-Icebolethu Foundation, iValley of Lilies Floral Boutique, iLily of the Valley Memorials, i-Icebolethu Financial Services ne-Icebolethu Funerals United Kingdom (UK) evulwe ngonyaka odlule e-England.
Kuyimanje usezinhlelweni zokuvula ihhovisi eNew York, e-United States of America (USA).
Leli bhizinisi eliqale ukusebenza ngokusemthethweni ngowezi-2010, linezisebenzi ezingama-600, ezili-100 kuzona zisebenza esikhungweni sezingcingo (call centre), linezindawo zokugcina izidumbu ezili-18 namagatsha angama-65.
UNkz Mcoyi uthi inhloso yakhe wukuba kuphele lo nyaka sesandile lesi sibalo.
“Leli bhizinisi ngiliqale ngingenalutho esandleni ngaphandle nje kombono nomlando ngesibongo sami njengoba umkhulu wami ubengusomabhizinisi owaziwayo.
Ngifundele ubuthishela e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), ngashiya ngowezi-2004 ukufundisa.
Ngaleso sikhathi bengishadile ngehlukanisa nomyeni wami okube yisigaba esibi kakhulu empilweni yami, kudingeke ukuba ngibuyele ekhaya eHammarsdale ngingenalutho esandleni.
Ngizame ibhizinisi lokupheka kodwa langaphumelela ngendlela ebengifisa ngayo, okuyilapho ngingene emkhakheni wezokungcwaba ngoba ngibona ukuthi kunesikhala somuntu wesifazane,” kusho yena.
Uthi yize engene kwezokungcwaba enenhloso yokukhula kuleli bhizinisi kodwa ubengenalo nhlobo ulwazi, usizwe wukuzimisela ngokufunda lo msebenzi.
Akakuyekile ukufunda njengoba ethi usahambela namazwe aphesheya kwezilwandle eqoqa ulwazi kwazise manje uthi ulungiselela ukuya eHawaii, e-USA nezinye izisebenzi zakhe.
“Ngifunde ibhizinisi kodwa okungisize kakhulu wukuqasha izisebenzi eziyisihlanu engiqale nazo ngoba bezinolwazi. Ngisho sengitatazela ngingazi ukuthi sizokwenzenjani ngesidumbu sokuqala esisitholile, zona bezinolwazi.
"Sisebenza emkhakheni onzima ngoba sibhekana nabantu abasosizini, abasuke belahlekelwe yizihlobo zabo, ngakho-ke kubalukekile ukuba izisebenzi zethu sizifundise inhlonipho ngaso sonke isikhathi.
Izisebenzi zesifazane kazivumelekile ukugqoka amabhulukwe, ikakhulukazi labo ababuye bahlangane nemindeni noma baha- mbele lapho kushonwe khona.
"Lokhu sikwenziswa wukuthi kumele sihloniphe ngaso sonke isikhathi. Kakubukeki isisebenzi sesibhushuzela ngebhulukwe emzini okushonwe kuwona," kusho yena.
Inkampani yakhe uthi iziqhenya ngokuthi iqasha abantu abanemfundo esezingeni eliphezulu, kusukela kuMnu Moses Mujaji, oyiGroup Chief Operations officer (COO) abe yi-Actuarial & Business Development Executive oneziqu ze-Actuarial Science azithole enyuvesi yaseLeicester e-UK, UNkk Nelisiwe Bulose oyi-Chief Financial Officer (CFO), oneziqu kwi-BComm Honours in Accounting nezinye izikhulu ezineziqu ngokuqhoqhobala kwabo izikhundla kulezi zinkampani.
"Kubalulekile ukugcina izisebenzi zami zeneme futhi zihleli kahle ngoba noma yini eziyenzayo ziye-nzela inkampani.
"Lokhu ngikwenza ngokuziholela ngendlela, wukuzinika imihlomulo ethile okuhlanganisa nempesheni.
"Uma isisebenzi sale nkampani sidlule emhlabeni, sisenzela umngcwabo osezingeni eliphezulu kuphinde kuphume nemali yempesheni ngaphezulu.
"Ngiyaziqhenya kakhulu ngezisebenzi zami ngoba ngilapho engikhona nenkampani idlondlobala kangaka nje, kungenxa yokusebenza kwazo kanzima,” kusho uNkz Mcoyi.
Njengoba i-Icebolethu laziwa ngokuthi wumasigcwabisane okwenzela yonke into uma ushonelwe, uNkz Mcoyi uthi usebenzisana nosomabhizinisi abasakhula ekutheni abalekelele ngokubasebenzisa uma engcwaba njengokuthi balethe amatende, nokunye okudingakalayo ukuze angakhuli yedwa.
Unabantwana abathathu, uthi uma kuvalwe izikole bayasebenza ngoba ufuna balifunde leli bhizinisi.
Yize inkampani yakhe yenza kahle kangaka, uhlelo aziqhenya kakhulu ngalo yiRhoda Girls (RG), lapho eqeqesha khona amantombazane angama-50 ngokuziphatha, wukuzithanda, ezamabhizinisi nokunye ezikudingayo empilweni ngoba ethi unethemba lokuthi kuzona kungaphuma abanye oNomfundo Mcoyi bakusasa.
Eminyakeni eyisihlanu ezayo ufisa i-Icebolethu Group, libe sohlwini lwezinkampani ezikwiJohannesburg Stock Exchange (JSE).
IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
UNKZ Nomfundo Mcoyi ehleli nezinye izikhulu eziphezulu enkampanini yakhe kwelinye lamahhovisi abo aseThekwini.
UNKZ Mcoyi ongumsunguli we-Icebolethu Group osebeke umkhakha wezabangcwabi eNingizimu Afrika kwelinye izinga njengoba esevule namahhovisi phesheya kwezilwandle.